कब्जियत, रगत बग्ने, चिलाउने, स्वास गन्हाउने, सम्बन्धित रोग छ भने खानुहोस् अमला ! - Arghakhanchi Saptahik
कब्जियत, रगत बग्ने, चिलाउने, स्वास गन्हाउने, सम्बन्धित रोग छ भने खानुहोस् अमला !
एक बहुगुणकारी फल हो । अमला खाँदा अमिलो र टर्रो भए पनि खाएको एकैछिनमा मुखमा मिठो स्वाद उत्पन्न हुन्छ । अमला अति स्वस्थकर फल हो । यी रोग र समस्यामा अमलाले फाइदा गर्छ ।
अमलाको सुकेको धुलोमा हर्रो र बर्रोको धुलो बराबर मिसाई एकदुई चम्चा सुत्ने
बेलामा खाँदा बिहान दिसा खु्ल्छ । सुकेको अमलाको चूर्ण नियमित रूपमा पानीसँग सेवन गर्दा आउँ, अपच र कब्जियतमा फाइदा गर्छ ।